TAMAANDHIGA "WICITAAN WANAAGSAN": SHARAXAAD IYO DABEECADAHA KALA DUWAN, SAWIRRADA MIRAHA, YAANYADA - BEER CAGAARAN
Darajo u adkaysta darajada tamaandhada ee xulashada Siberian "Wicitaan Ba'an"
Tomato Wicitaan Joogto ah wuxuu leeyahay midho badan oo macaan. Diirad saarista dharka saladhka. Noocyo Bushes ah oo go'aamiya, ma ahan heer. Noocyo u adkaysta cudurada iyo cayayaanka.
Waxaad wax dheeraad ah ka baran kartaa tamaandhadani maqaalkeenna. Waxyaalahayaga waxaan ku soo bandhigi doonaa dareenkaaga sharaxaad dhamaystiran oo kala duwan, sifooyinka iyo astaamaha tiknoolajiyada beeraha.
Tamaandhada "Wicitaan Ba'an": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Wicitaan joogto ah
Sharaxaad guud Dalagga xilliga beeraha
Bisaylka 100-120 maalmood
Foomka Isku-xajin, oo leh cirbado sahlan oo qumman
Midab Boorashka madow
Cunto dhexdhexaad ah 500 garaam
Codsiga Salad kala duwan
Noocyo dhaadheer 3.7 kg mitir labajibbaaran
Cadaadiska cudurada Taabashooyinka cudurada
Tomato Wicitaan Bariisasho ah - kala duwan bartamaha bartamaha. Laga soo bilaabo geedo beerto si aad u Bisaylkiisa buuxda, 110-120 maalmood ka gudub. Qeybaha hoose ma aha dhexdhexaad. Waxay leedahay caleemo dhexdhexaad ah oo ah midabka mugdiga mugdiga ah ee madow. Qalabaynta ee asliga ah ma laha. Duufaanku waa mid sahlan.
Wax-soosaarka miraha ganacsiga wuxuu gaari karaa 97%, si buuxda u bisil - 76%. Waxsoosaar maaha mid aad u sareeya. Laga bilaabo 1 jibbaaran. m. Waxaad qaadan kartaa 3.7 kg oo miro ah. Iyadoo 10 acres ay soo ururiyaan 3.7 ton. Kaydinta qabow, miraha waxaa lagu kaydin karaa ilaa 45 maalmood. Noocyada tayada ganacsiga ayaa aad u sarreeya. Tamaandhada waxaa loo qaadi karaa masaafo dheer.
A tilmaam wanaagsan ee dhalidda;
Kordhinta gobollada qaboobaha ee dalka;
Gaadiidka sare ee waxoogaa yar oo aan midabaysan.
Miro macaan oo buuxa ayaa laga yaabaa inay sii xumaato bandhigga.
Wicitaan joogto ah 3.7 kg mitir labajibbaaran
Asalka asalkoodu hooseeyo waa Vladimir Nikolaevich Dederko. Qeybaha hoose waxay ku jiraan diiwaanka gobolka ee Federaalka Ruushka si loogu beero ciidda furan ee beeraha yaryar ee gaarka ah. Waxay soo gashay Novosibirsk. Xasilinta xaaladaha cimilada. Waxay ku kori kartaa meelaha ugu qabow iyo kuwa qaboobaha. Kala duwan ayaa si ballaaran loo qaybiyaa guud ahaan dhulka Ruushka. Tamaandhada si fiican u kora Belarus, Moldova, Kazakhstan iyo Ukraine.
Meeshan yaanyada salad ah. Tamaandho waa la wada baabbi'iyey.
Waxay leedahay dhadhan fiican. Waxay leedahay dhadhan sonkor ah.
Tamaandho waa arrin aad u liidata.
Ilaalinta waxaa loo isticmaalaa dhif ah.
Celceliska miisaanka midhaha waa 500 garaam. Tamaandhada ugu weyn waxay la egtahay ilaa 900 garaam.
Qaababka miro ayaa ku haboon.
Waxay soo koobtay geesaha cirifka iyo dusha sare.
Midabka midhihii bislaaday waa midab madow. Miraha qunyar-socodka ahi waxay leeyihiin hooskii iftiiminta iftiinka iyo meel caleemo madow ku xigta asliga ah. Muujinayaan asliga ah ka hor inta aan la oofin hoonaanta mugdiga mugdiga ah.
Tirada kamaradaha: 4 ama kabadan.
Wicitaan joogto ah 500-900 garaam
Giant Sarre 400 garaam
Qalab aan kala sooc lahayn 600-800 garaam
Orange Ruush 280 garaam
Wild rose 300-350 garaam
Dhabir xayawaan ah 160-210 garaam
Garlic 90-300 garaam
Newbie casaan 120-200 garaam
Cosmonaut Volkov 550-800 garaam
Noocyada xayawaanka ayaa go'aaminaya. Jooji inuu koro kaddib marka la sameeyo 5-5 burush. Bukaarku maaha dabin. Qeybaha hoose waxay u baahan yihiin jaridda dhirta, loosinta ciidda, waraabinta nidaamsan. Sida nuujin waxaad isticmaali kartaa Bacriminta macdanta. Kicinta kobcinta ayaa loo oggol yahay. Qaybaha hoose waxay si fiican u koraan carrada madow iyo ciidda lagu qasi karo humus. Tamaandho waa la kori karaa dhul furan iyo xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo.
Dhismaha soo dejinta: 40x50 cm. m. lagu taliyey in la beero wax ka badan 7-9 oo duurka. Iyada oo garter ah ayaad ku kori kartaa 2-3 afkoda. Heerka duurka waxay gaaraan 50-70 cm. Xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, waxay duurka u koraan ilaa 1 m.
Dhirta qulqulaya ayaa leh xaddidaad korodh ah. Meelaha dhexe ee ugu sareeya waxay sameeyaan burush ubax ah. Dhammaadka asliga ah waxaa loo sameeyey ugxan-yaanyo leh yaanyo. Ka dib muuqaalka miraha ugu horreeya, ugxan-dumarku wuu joojiyaa. Koboca xigta ee dhirta ayaa ka timaada tallaabada ugu weyn, oo ku taalla axil caleenta hoose.
Muuqaalka ugu muhiimsan ee tamaandhada sii kordhaya waa in ay kuwii hore ee beerta waa inay noqdaan qajaarka, dhir, zucchini, dill, aan tayo lahayn ama karootada. Xaaladdan, dhalidda waxay noqon doontaa mid aad u sareysa. Kala duwanaantu maaha cudurro. Sida tallaabo ka hortag ah oo ka dhan ah cayayaanka, ciidda taas oo duurka u noqon doonaa beeray waa in lagu daaweeyo leh steam kulul.
Qeybaha hoose waxay u baahan yihiin in badan oo qorax ah. Haddii ay duurka u leeyihiin saacadaha iftiinka ku filan, yaanyada waxay noqon doontaa mid yar oo aan qaan gaarin. Heerkulka ugu wanaagsan ee koritaanka waa 23-25 ​​° C. Kala duwanaantu waxay u adkeysan kartaa heerkulka hooseeya inta u dhaxaysa 18-20 ° C.
Sababtoo ah qaabka ay u shaqeyneyso, dhalidda ugu sareeysa waxay noqon doontaa bilowga hore. Later, yaanyada waxay hoos u dhigi doonaan mugga iyo miisaanka.
Tamaandhiga "Wicitaan Wanaagsan" wuxuu ku kori karaa gobollada qaboobaha ee dalka. Waxay ilaalisaa heerkulka hooseeya. Wuxuu u baahan yahay jaridda dhirta, loosinta ciidda, waraabinta nidaamsan. Taabashooyinka cudurada. Waxay leedahay dhalid sare. Tamaandho yihiin macaan, gaarey 900 garaam.